Oge mmiri na-agwọ ọrịa | Rayson
3 Mpaghara ụdọ na ahịhịa ngwa ngwa
Nke a matraasist na-egosipụta ohiri isi elu, na-eme ka ọ dị ka ihe mara mma. Ọganihu nke ụba ụfụ site n'aka ndị matraasi kwụsịrị gị mmetụta na isi iyi, nke a na-emekwa ka ndị mmadụ nwee ahụmahụ ụra nke ọma karịa. A na-eji ụfụfụ etiti ahụ dị elu na-eji ụfụfụ dị elu, dịkwa jụụ ma jụụ. Icheta ụfụfụ na Ahụhụ nke Ahụhụ, Jiri nwayọ nwayọ, mgbe ị na-eri nrụgide nke mmadụ iji dozie ahụ na ọnọdụ kachasị mma. O nwere ike imeju ihe ndi umu nwoke na ndi nwanyi di iche.
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Oge mmiri na-ehi ụra taa, Rayson ga-adị elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na nke nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo banyere usoro ọgwụgwọ mmiri ọhụrụ anyị site na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ US.Rayson na-aga n'ihu n'usoro nyocha ọhụụ. Ha bụ agba, ọdịdị, ụcha dabara, na ịdị ọcha nke iri eri.